Indwangu eshisiwe ye-Melt (indwangu encibilikisiwe engavukiwe) ingumkhiqizo owenziwe ngendwangu yokuncibilika ephezulu ye-PP (polypropylene) yendwangu engeyona eyelukiweyo. Kuyinto esemqoka yemaski. Ububanzi be-fiber ye-spinneret bungafinyelela ku-0.001 kuye ku-0.005 mm. Kunezikhala eziningi, ukwakheka okuluhlaza, ukumelana okuhle kombimbi, ...
Imikhiqizo yePulasitiki idlala indima ebalulekile emikhakheni eyahlukahlukene yokukhiqiza kwezimboni nezolimo kanye nempilo enezakhiwo zazo ezinhle kakhulu ezifana nesisindo esincane, amandla aphezulu, ukumelana nokugqwala, nokucubungula okulula. Kodwa-ke, ngokusetshenziswa kabanzi kwemikhiqizo yepulasitiki, ukulahlwa o ...
Ungayikhetha kanjani ipayipi le-PVC?
1. Uphawu lwethubhu yocingo kagesi, naka ukuthi igama lomkhiqizi, imodeli yomkhiqizo, nezindinganiso zokuqalisa ezikhonjisiwe kushubhu le-bai wire ziyahambisana yini, futhi zivimbela nemikhiqizo yomgunyathi i-dao. 2. Ukubukeka akulimalanga, futhi akufanele kube khona okukhanyayo, ...